Oku kunokuba likamva lommandla we-macOS | Ndisuka mac
Kule minyaka idlulileyo sihlangabezana nengxoxo-mpikiswano malunga nekamva le-macOS. Ngokufika kwe-MacOS Sierra, bekukho intetho eninzi malunga nokuba inkqubo yokusebenza ye-Mac desktop kufuneka ijongeka njenge-iOS, into efana naleyo yenziwa nguMicrosoft. Ixesha liphelile ngokuvumelana neApple, njengamanye amaxesha amaninzi. IMacOS ineempawu zayo ezenza ukuba ibaluleke kakhulu kwikhompyuter, kwaye kwenzeka okufanayo nakwezinye iinkqubo zokusebenza kweApple. Ngayiphi na imeko, rhoqo umyili wemizobo udlala ngengcinga yakhe kwaye asibonise ukuba ulibona njani ikamva le-macOS.
Ewe kunjalo, into esiyibonayo kukunxibelelana, oko kukuthi, ipeyinti yangaphandle, kwaye asazi ukuba oku kunokwenziwa okanye kuncame ezinye izinto yenye yezona nkqubo zisebenzayo zomzuzu. Enye into, ukusukela ngo-Yosemite ngo-2014, ujongano lwe-macOS alwamkelanga naluphi na utshintsho olubalulekileyo. Namhlanje siyasazi isindululo sika UAurélien Salomon, othumele ezinye izimvo kwinkqubo yakhe yokusebenza egqibeleleyo.
Okokuqala, ime ngendlela ecocekileyo, ngaphandle kwezakhelo, into esingayibonanga kwi-macOS. Inkqubo yethu yokusebenza ayinanto yakubamonela abanye ngokubhekisele kuyilo, kodwa ayijongi imizobo apho izicelo zidada khona. Nangona ubuhle buhle: I-Safari ngokungabikho kwebar yomsebenzi kunye ne-Finder kwimodi emnyama, apho iifayile zibonakala khona xa zikwimibala ekhanyayo.
I-Apple OS Design Concept yingcinga ebendinayo engqondweni ixesha elide kwaye ndiyavuya ukwabelana ngayo nawe namhlanje. Kukuphononongwa ngendlela ebonakalayo, ayicelwanga nangubani na, yenzelwe ukonwaba. Injongo yayingekokusombulula zonke iingxaki kwaye andithethi ukuba "ibhetele" kunale nto sinayo ngoku. Ndifunde lukhulu ngalento kwaye bekumnandi kakhulu.
Okokugqibela, uSolomon uceba uyilo olungenasiphelo. Oku kunokuba sisiqhelo kwiiMacs ezizayo, kwaye abayili beMacOS banokuba besebenza kwimodeli efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Oku kunokuba likamva lommandla we-macOS
I-LEGO Star Wars Saga, iyathengiswa ixesha elincinci